UMshini yisikhali seChiefs esincanyana kodwa esiyingozi
UNkosingiphile "Mshini" Ngcobo
Bekuyisizini enzima kwiKaizer Chiefs futhi nokufika kwayo kowamanqamu kwiCAF Champions League kusabamangazile abaningi. Kodwa okuhlalukile ngeChiefs wukuqhamuka kwesihlabani esisesincane, uMshini omncanyana okhuthuza izitha emini kwabha.
Lowo nguNkosingiphile “Mshini” Ngcobo ongowokuzalwa eMngungundlovu ondongazibomvu. Lo mfanyana oneminyaka engu-21 ukhombise ukuba nekhono elimangalisayo.
Ukunikwa kwakhe unombolo 15 emidlalweni yeChampions League wuphawu lokwethenjwa kwakhe kuleli qembu. Le nombolo ayisasetshenziswa kwiChiefs emidlalweni yakuleli ngoba kuhlonishwa uDoctor “16V” owayeyigqoka esadlala.
Cishe akekho umlandeli weChiefs ongamazi uKhumalo noma ongafisi sengathi engaphinde abe mncane abuyele enkundleni. UNgcobo usasivikele kahle isithunzi sale nombolo.
Lokhu ukwenze yize iChiefs idlala ngendlela engamvumeli ukuba azibonakalise kulo mqhudelwano weCAF. IChiefs isebenzisa iqhinga lokuzihlalela emuva ivale zonke izimbobo bese ihlasela ngaleso sikhathi uma kuvuma ithuba.
Lisasebenzile ke leli qhinga ngoba nakhu seyize yafika kowamanqamu la izobhekana khona ne-Al Ahly efuna ukuwina lesi sicoco ihlandla leshumi. Umdlalo wamanqamu uzoba seStade Mohammed V, eCasablanca eMorocco.
UNgcobo, olihlikihla esiswini maphakathi nenkundla, uthi ukwenza kahle kwabo kwiChampions League yinto enkulu kuye kwazise usaqala ebholeni elikhokhelayo.
“Ngijabule kakhulu ukuthi size sifike kulesi sigaba kwiCAF (Champions League), siyodlala owamanqamu. Ngicabanga ukuthi kube wukwenza kahle kwethu siyiqembu okusenze saze safika lapha.
“Manje sekumele siqinisekise ukuthi uma sesidlala owamanqamu siyaqhubeka nokuzikhandla. Kimi lokhu yinto enkulu kakhulu ebholeni lami. Baningi abalifisayo leli thuba.
“Mina ngoba sengilitholile ngizoqinisekisa ukuthi ngilisebenzisa ngendlela eyiyo. Ngijabule kakhulu futhi ngiyaziqhenya ngomsebenzi engiwenzile nowenziwe yiqembu lilonke,” kusho uNgcobo.
Uthi njengoba iChiefs iyiqembu elikhulu nje, ukufika kowamanqamu kufanele kube yinto ejwayelekile. Yingakho bezolwela ukuthi benze obekungacatshangwa muntu ngokuthi bayiqukule le ndebe.
“Ngicabanga ukuthi eqenjini elikhulu njengeChiefs kuyinto elifanele ukuba emdlalwemni wamanqamu ofana nalo weChampions League. Yingakho ngicabanga ukuthi senze kahle kakhulu.
FUNDA NALA: UHunt uzonikwa inkululeko yokuzisayinela abadlali abathandayo kwiChippa United
“Nginesiqiniseko sokuthi umndeni wonke weKaizer Chiefs ujabule kakhulu… sizobe singamele iKaizer Chiefs yodwa kepha isizwe sonke saseNingizimu Afrika. Ngicabanga ukuthi umsebenzi omkhulu lona.
“Nokwesekwa esikuthola kubo bonke abantu baseNingizimu Afrika siyakujabulela. Sizokwenza isiqiniseko sokuthi siyabajabulisa.
“Kubalandeli beKaizer Chiefs, nabo bonke abantu baseNingizimu Afrika, ngifuna ukuthi siyabonga ngokuseseka kwenu niqhubeke njalo. Thina sizozimisela, senze isiqiniseko sokuthi siyanijabulisa,” kusho uMshini.
Ngezimbangi zabo ezisathswayo ebholeni lase-Afrika, uNgcobo uthe: “I-Al Ahly iyiqembu eliqine kakhulu. Kodwa siyilungiselele kahle. Umoya ovunguza eqenjini muhle kakhulu. Sizofika laphaya kowamanqamu senze isiqiniseko sokuthi siyakulwela ukuthola umphumela ozojabulisa bonke abantu bakuleli.”
Previous Previous post: UMpengesi uthi uHunt uzonikwa amandla ayenawo kwiWits
Next Next post: URamoreboli ujabule ngokuqala ngewini kwiBafana